Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.2.3 Famaranana
Human computation mahatonga anao ho afaka manana mpanampy arivo fikarohana.
Human computation tetikasa mitambatra ny asa ny olona maro tsy manam-pahaizana mba hamaha mora-asa-lehibe-ambaratonga olana izay tsy mora voavaha ny ordinatera. Izy ireo mampiasa ny fisarahana-mampihatra-mitambatra tetika mba hotapahiny ny olana lehibe ho maro tsotra micro-asa izay mety ho voavaha ny olona tsy fahaiza-manao manokana. Faharoa taranaka computation olombelona rafitra mampiasa milina ihany koa ny fianarana mba hanamafisana ny ezaka olombelona.
Ao amin'ny fiaraha-monina fikarohana, olombelona computation tetikasa dia azo ampiasaina amin'ny toe-javatra izay te mpikaroka ny nanasokajy, fehezan-dalàna, na ny marika sary, horonan-tsary, na ny andinin-teny. Ireo sokajy ireo dia tsy ho farany; izy ireo ny akora ho an'ny fikarohana. Ohatra, ny vahoaka-Coding ny fandaharan'asan'izy ara-politika azo ampiasaina mba hitsapana teoria mikasika ny fihetsehana ny sain'ny amin'ny fifindra-monina.
Mba bebe kokoa ny fahaizanao maminavina ny hanangana, Table 5.1 fanampiny dia manome ohatra momba ny fomba computation olombelona no ampiasaina amin'ny fiaraha-monina fikarohana. Io latabatra mampiseho fa, tsy toy ny kintana Zoo, maro olombelona hafa computation tetikasa mampiasa micro-tsena asa asa (ohatra, Amazon Mechanical Turk). Aho hiverina any amin'ity gazety ity ny antony manosika ny mpandray anjara, rehefa manome torohevitra momba ny aho mamorona anao manokana faobe tetikasa fiaraha-miasa.
Table 5.1: Ohatra ny olona ao amin'ny fiaraha-monina computation tetikasa fikarohana.
Coding antoko fandaharan'asan'izy lahatsoratra kiritika asa tsenan'ny asa Benoit et al. (2015)
hanesorana hetsika vaovao avy amin'ny vaovao lahatsoratra momba ny Hetsi-panoherana Occupy tamin'ny 200 US tanàna lahatsoratra kiritika asa tsenan'ny asa Adams (2014)
fanasokajiana ny gazety lahatsoratra lahatsoratra kiritika asa tsenan'ny asa Budak, Goel, and Rao (2016)
Ny fakana hetsika vaovao avy amin'ny diary ny miaramila tamin'ny Ady Lehibe 1 lahatsoratra mpiasa an-tsitrapo Grayson (2016)
mahita fiovana eo amin'ny sarintany sary kiritika asa tsenan'ny asa Soeller et al. (2016)
Farany, ny ohatra ao amin'ity fizarana ity mampiseho fa olona computation Mety hisy fiantraikany eo amin'ny siansa demokratika. Tsarovy, fa Schawinski sy Lintott ireo mpianatra nahazo diplaoma, rehefa nanomboka Galaxy Zoo. Talohan'ny amin'ny taona nomerika, ny tetikasa ny nanasokajy ny kintana tapitrisa fanasokajiana ho ilaina be ny fotoana sy ny vola fa dia ho afa-tsy efa azo ampiharina ho tsara-novatsian'ny sy marary mpampianatra. Izany no tsy marina. Human computation tetikasa mitambatra ny asa ny olona maro tsy manam-pahaizana hamaha mora-asa-lehibe-ambaratonga olana. Manaraka, hasehoko anao aho fa fiaraha-miasa faobe Azo ampiharina amin'ny zava-manahirana izay mitaky fahaizana, fahaizana fa na ny mpikaroka ny tenany mba tsy manana.